टिनएज नाइट पार्टी मेकअप
सुष्मा थापा, सौन्दर्यकर्मी, जेष्ठ ७, २०७५
पहिरन, छालाको रंग तथा अनुहारको सेप हेरी सोहीअनुसार प्रसाधन प्रयोग गर्नुपर्छ । टिनएजका लागि मस्कारा तथा लाइनर महत्वपूर्ण हुन्छन् । -- पुरै पढ्नुहोस् --
डा. मधु पाण्डे, जेष्ठ ७, २०७५
छोटो अवधिका लागि देखिने कडा खालका जटिलता डाइबिटिज केटोएसिडोसिस एवं नन्केटोटिक हाइपरोस्मोलार कोमा हुन् भने लामो समयसम्म रहने जटिलतामा मुटु तथा रक्त नलीका रोग (कार्डियो भास्कुलर डिजिज), स्ट्रोक, मिर्गौलामा खराबी, खुट्टामा अल्सर तथा आँखामा सिर्जना हुने खराबी आदि प्रमुख छन् । -- पुरै पढ्नुहोस् --
पुरुषहरु कहिले र किन झूटो बोल्छन् ?
नारी संवाददाता , जेष्ठ ६, २०७५
पुरुषहरूमा बाल्यावस्थादेखि नै आफूलाई विशेष मान्ने बानी हुन्छ । यसमा पारिवारिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । यही विशेषताका कारण पुरुषहरू झूटो बोल्छन् । हुनत यसमा अपवाद पनि उत्तिकै हुन्छन् । श्रीमतीले सोध्ने अनेकथरी सवाल–जवाफबाट जोगिनश्रीमान्हरू झूट बोल्छन् । -- पुरै पढ्नुहोस् --
फेसनमय एन्जल्स अन् द फ्लोर
ढंगबाट प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनीहरुले ७८ फिट लामो रनवेमा करिब साढे दुई घण्टा ओहोर दोहोर गरे । गायिका एवं डिजाइनर मनिषा पोखरेलद्वारा तयार पारिएको ककटेल वेयर तथा क्याजुयल शैलीका साडीहरुको प्रस्तुतिबाट प्रारम्भ भएको उक्त फेसन शोले एस आर कलेक्सन एण्ड बुटिककी सुरक्षा रेग्मीले तयार पारेका विभिन्न स्टाइल, डिजाइन तथा स्वरुपका गाउनहरुको कलेक्सनको प्रस्तुतिबाट कार्यक्रमले बिट मारेको थियो । -- पुरै पढ्नुहोस् --
नर्भिकको रजत महोत्सव
नारी संवाददाता , जेष्ठ ४, २०७५
रजत महोत्सवको अवसर पारेर अस्पतालले अत्याधुनिक सुविधायुक्त चार शैयाको हेमोडायलाईसिस सेवा पनि शुभारम्भ गरेको थियो, जसको विशेषताका बारेमा नर्भिकका वरिष्ठ नेफ्रोलोजिस्ट डा. राजेन्द्र अग्रवालले जानकारी दिएका थिए । -- पुरै पढ्नुहोस् --
लक्ष्मी भण्डारी थापा, जेष्ठ ४, २०७५
यो सम्मान कार्यक्रमका लागि सम्बन्धित निकाय, प्रतिष्ठित महिला, संस्था तथा व्यक्तित्वहरूबाट जति चासो र सहकार्य हुनुपर्ने हो त्यो त पक्कै भएन र भएको पनि छैन । न महिला सशक्तीकरणको मूलधारमा यी छरिएर बसेका सकारात्मक परिवर्तनका वाहकहरूलाई समावेश नै गरिएको छ । -- पुरै पढ्नुहोस् --
नारी संवाददाता , जेष्ठ ३, २०७५
म आफ्नो पहिरन मिलाएर अघि बढ्न ठिक्क परिसकेकी थिएँ । मेरो नाम घोषणा हुँदा खासै अचम्म वा अनौठो लागेन, किनभने मैले त्यो क्षणको कल्पना पहिले नै गरिसकेकी थिएँ । मेरो आत्मविश्वास नै मेरो जितको मुख्य कडी हो । -- पुरै पढ्नुहोस् --
मुना थापा, फेसन डिजाइनर, जेष्ठ ३, २०७५
अफिसमा क्याजुअल थिमका लागि अथवा साथीहरूसँग घुम्न कुन प्रयोजनमा जिन्स प्रयोग गर्ने हो विचार गरेर निर्णय गर्नुपर्छ । अफिसमा लगाउने जिन्स सामान्य र क्लासी हुनुपर्छ । साथीहरूसँग घुम्न जाँदा लगाइने जिन्स न्यारो–फिट, ग्रन्च र फेसनेबल जस्तो पनि हुनसक्छ । -- पुरै पढ्नुहोस् --